🥇 Ulawulo lwe-salon
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 655
Ividiyo yolawulo lwesalon
Cwangcisa ukulawulwa kwesalon
Ulawulo lwe-salon yobuhle yenye yeenkqubo ezizodwa kwimisebenzi yabantu. Njengakwiinkampani ezininzi, inezinto zayo ezichaphazela umbutho, ulawulo, ukuhamba komsebenzi kunye noqeqesho lwabasebenzi. Iinkqubo zolawulo lwee salon ezingakhuselekanga (ikakhulu iinkqubo zolawulo lwe studio, ezinye ezizama ukukhuphela simahla kwi-Intanethi) zihlala zibangela ukusilela, kwaye ukunqongophala kwenkxaso yobuchwephesha esemgangathweni kukhokelela ekulahlekelweni kwedatha eqokelelweyo nefakiwe. Kwixa elizayo, oku kubangela ukunqongophala kwexesha lokuba abasebenzi benze ulawulo lomgangatho we-salon, kunye nolawulo, imathiriyeli kunye nophatho-mali, ulawulo lwabasebenzi kunye noqeqesho kwisalon, njl. Esona sisombululo sisiso kunye nesixhobo sokwandisa umsebenzi inkampani yakho kule meko iya kuba yi-automation yolawulo lwe-salon. Ukuba inkampani yakho inomdla wokulungiselela inkqubo yolawulo esemgangathweni (ngakumbi inkqubo yolawulo lwabasebenzi kunye nolawulo kuqeqesho lwabo), akunakwenzeka ukuba uyikhuphele simahla kwi-Intanethi. Eyona mveliso ilungileyo yesoftware ekwaziyo ukujongana nalo msebenzi yinkqubo yolawulo lwe-salon ye-USU-Soft, ekunceda ukuba uzalisekise izinto ezizenzekelayo, ubalo-mali, abasebenzi kunye nolawulo lobalo-mali kwi-salon yobuhle, ukongeza, ukugcina ngexesha elifanelekileyo ulawulo lomgangatho kwi-salon yobuhle, kusetyenziswa ulwazi olufunyenwe ngexesha lokufakwa kwenkqubo yethu. Inkqubo yolawulo lwe-salon ye-USU-Soft inokulungiswa kwaye isetyenziswe ngempumelelo ziinkampani ezahlukeneyo kwishishini lobuhle: i-salon yobuhle, istudiyo sobuhle, i-nail salon, iziko le-spa, kunye ne-solarium, i-salon yokuthambisa, njlnjl. Inkqubo yolawulo lwesalon yokuzibonakalisa ibonakalisile ukuba iphumelele eKazakhstan nakwamanye amazwe eCIS. Umahluko omkhulu phakathi kwenkqubo yolawulo lwe-USU-Soft kunye neemveliso ezifanayo zesoftware kulula kunye nokusetyenziswa ngokulula. Umsebenzi ukuvumela ukuba uhlalutye lonke ulwazi olunxulumene nomsebenzi we-salon yakho ilula kakhulu.
I-USU-Soft njengenkqubo ye-salon yobuhle ilungele ngokulinganayo kumlawuli, umphathi, inkosi ye-salon yobuhle, kunye nomsebenzi omtsha oqeqeshwayo. Inkqubo ezenzekelayo yolawulo ivumela ukuhlalutya imeko yentengiso, kuvavanya amathemba ophuhliso lwenkampani. Zonke iintlobo zeengxelo zenziwe ukunceda umphathi wokwenza oku. Isoftware yolawulo lobuhle iya kuba ngumncedisi ongenakuphikiswa kumphathi wobuhle ekulawuleni i-salon yobuhle, njengoko inika ulwazi olubonakalayo lokwenza izigqibo zolawulo olulinganayo (umzekelo, ukubuyisela indawo yangaphakathi, ukwazisa uluhlu olutsha lweenkonzo, ukuqeqesha abasebenzi , njl. Ngamanye amagama, inkqubo ye-automation kunye nolawulo lwe-salon yobuhle inceda ukukhawulezisa ukuqhubekeka, kunye negalelo kunye nemveliso yolwazi. Inkqubo yolawulo ikwanceda ekuhlalutyeni umsebenzi we-salon yobuhle, ekhulula ixesha labasebenzi bakho lokusombulula ezinye iingxaki (zoqeqesho lokuqonda uhlobo olutsha lomsebenzi ukuqhubela phambili ukusebenzisa ezi zakhono kwaye ngenxa yoko, ukwandisa ukhuphiswano inkampani yakho). Ukuba unevenkile kwivenkile yakho yobuhle, uya kufumana amanqaku amaninzi aluncedo emsebenzini wakho. Imodyuli yolawulo oya kuyisebenzisa rhoqo 'yiNtengiso'. Xa ufaka le modyuli, ubona iwindow yokukhangela idatha. Xa kukho amangeniso amaninzi, unokucokisa iikhrayitheriya zakho zokukhangela ukuze uwonge umsebenzi wakho. Indawo 'yokuThengisa ngomhla' iya kubonisa konke ukuthengisa ukuqala ngomhla othile. Ukwenza oko, cofa utolo kwikona yasekunene yendawo engenanto. Kwiwindow ebonakalayo, unokukhetha unyaka, inyanga, umhla okanye usete umhla wangoku ngaxeshanye usebenzisa umsebenzi we 'Namhlanje'. Umhla 'wokuthengisa' kwintsimi ikuvumela ukuba ubonise konke ukuthengisa kumhla othile. Umhlaba 'weKlayenti' ubonelela ngokukhangela umntu othile. Ukuze ukhethe umthengi othile, kuya kufuneka ucofe iisimboli ezinamachaphaza amathathu kwikona yasekunene yomhlaba. Emva koko, inkqubo yolawulo ivula ngokuzenzekelayo uluhlu lweenkcukacha zabathengi. Emva kokukhetha umxhasi ofunekayo, cofa indawo ethi 'Khetha'. Emva koko, usetyenziso lolawulo lubuyela ngokuzenzekelayo kwiwindows yokukhangela yangaphambili. Umsebenzi owenze intengiso ubonakalisiwe kwicandelo 'lokuThengisa'. Lo msebenzi unokukhethwa kuluhlu lwabasebenzi kwiziko ledatha. Intsimi 'ebhalisiweyo' isetyenziselwa ukukhangela ngabasebenzi ababhalise ukuthengisa kwisoftware.
Yeyiphi eyona nto ibalulekileyo kulo naliphi na ishishini elibonelela ngeenkonzo? Uninzi luya kuthi indlela ethembekileyo kulawulo, impumelelo kukhuphiswano kwiimarike, ukukwazi ukutsala abathengi. Ngaphandle kwamathandabuzo, idlala indima ebalulekileyo. Ukanti, eyona nto ibaluleke kakhulu ngabaxhasi kunye neengcali ezilungileyo. Ezi zinto zimbini, ngaphandle kwazo ukubakho ngempumelelo kwe-salon yobuhle akunakwenzeka. Kuyimfuneko ukutsala abathengi abaninzi ngangokunokwenzeka, kusetyenziswa iindlela ezahlukeneyo zentengiso, iinkqubo zebhonasi, izaphulelo nokwazisa. Inkqubo yethu yolawulo lwesalon iya kukunceda koku, njengoko inemisebenzi emihle. Inkqubo yolawulo idala inani elikhulu leengxelo. Uya kubona ukuba loluphi uhlobo lwentengiso olusebenzayo nolutsala abathengi kunye nolungasebenziyo, ukuze ungachithi imali lilize kwaye uyalathise kwinto efunekayo kwishishini lakho. Okanye kukho ingxelo ebonisa izizathu eziphambili zokuba kutheni abathengi beshiya i-salon yakho yobuhle. Uya kusiqonda isizathu sokuba oku kwenzeke, kwaye kwixa elizayo wenza konke okusemandleni ukukuthintela. Kubalulekile hayi ukutsala abathengi kuphela, kodwa nokugcina abathengi abadala. Ukuba bajike babe ziindwendwe ze-VIP, baba ngumthombo othembekileyo wemali kwaye bazisa eyona nzuzo izinzileyo. Kubalulekile ukukhuthaza abathengi abanjalo ukuba baqhubeke nokuba ziindwendwe zakho eziqhelekileyo.